Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/andevo
Proverbe 45 Afa-drofy , tsy tian-drofy , fa andevo kely. [Veyrières 1913 #4102]
Proverbe 399 Andevo amidy tsy alan-tsaimbo . [Samson 1965 #A64]
Proverbe 400 Andevo am--patana . [Veyrières 1913 #500]
Proverbe 401 Andevo havana . [Veyrières 1913 #2484]
Proverbe 402 Andevolahy avy nandranto : izay atao rehetra "izaho avy nandranto " . [Veyrières 1913 #502]
Proverbe 403 Andevolahy be lamosina , ka tsy mifidy zaza hobabena . [Veyrières 1913 #503, Cousins 1871 #173]
Proverbe 404 Andevolahy diso fanam--bomanga , ka misy irain-jehy ny tendany sy manavandra ny taimasony . [Veyrières 1913 #534]
Andevolahy diso fanam-bomanga : manavandra ny taimasony . [Cousins 1871 #174]
Andevolahy tsy mahatratra fanam--bomanga , ka misy irain-jehy ny tendany sy manavandra ny taimasony . [Veyrières 1913 #534]
Andevolahy tsy nahatratra fanam-bomanga , ka misy irain-jehy ny tendany . [Cousins 1871 #197]
Proverbe 405 Andevolahy diso hena ratsy : ny tompon' alahelo no ataony ratsy lanja . [Veyrières 1913 #504, Cousins 1871 #175]
Proverbe 406 Andevolahy diso rasa : ny fe no tehafina . [Veyrières 1913 #505, Cousins 1871]
Proverbe 407 Andevolahy diso rasa : ny taim-boraka no avadibadika . [Veyrières 1913 #506, Cousins 1871]
Mpanompo diso levenana ka ny taim-boraka no avadibadika . [Rinara 1974 #2597]
Proverbe 409 Andevolahy feno kibo , minia tsy handositra ; fa andevolahy noana , mitomany hamidy . [Veyrières 1913 #508]
Proverbe 410 Andevolahy latsaka avara-patana , ka saro-miala . [Houlder 1895 #1552]
Proverbe 411 Andevolahy mahita entan- kitay , ka mahatsiaro ny fanompoana fanao. [Veyrières 1913 #510, Cousins 1871 #179]
Mpanompo mahita an' entan- kitay ka mahatsiaro ny fanompoana fanao. [Rinara 1974 #2599]
Proverbe 412 Andevolahy mamahy reniomby , ka mamindra fo , fa samy haren' olona : ny omby "aza mifidy vilona ", ny andevo "aza maka ny ratsy ". [Veyrières 1913 #511]
Andevolahy mamahy reniomby , ka mifamindra fo, fa samy haren’ olona : ny omby aza mifidy vilona , ny andevolahy aza maka ny ratsy . [Cousins 1871 #180]
Proverbe 413 Andevolahy mamono tompo mangina : voky hena indray alina , fa hiongo-belona herintaona . [Veyrières 1913 #512, Cousins 1871]
Andevolahy mamosavy tompo : voky hena indray alina , fa hiongo-belona herintaona . [, , Cousins 1871]
Proverbe 414 Andevolahy mampirafy : intelo mihosina ampombo . [Cousins 1871 #182]
Proverbe 415 Andevolahy mampirafy , ka maka kitay telo entana . [Veyrières 1913 #514]
Proverbe 416 Andevolahy mampirafy , ka manita-draharaha . [Veyrières 1913 #515]
Proverbe 417 Andevolahy mampirafy : tsy haitraitra , tsy angolangola , fa ny kibo tsy feno. [Veyrières 1913 #516, Cousins 1871 #184]
Proverbe 418 Andevolahy manan' omby zato : ny tenany aza ahy, mainka ny omby zato . [Veyrières 1913 #517]
Proverbe 419 Andevolahy manao jirik' olona : tsy misoroka ny razana iombonana . [Veyrières 1913 #518, Cousins 1871 #186]
Proverbe 420 Andevolahy manavo-tena , manao ambarivatry mitain-tenany . [Cousins 1871 #185]
Proverbe 421 Andevolahy mandihy an-jezika : mahare ny fingodony , fa tsy mahita ny handitsiky ny masony . [Houlder 1895]
Proverbe 422 Andevolahy maty hariva , ka vovon' alika no anjara tafondrony . [Veyrières 1913 #522, Houlder 1895]
Proverbe 423 Andevolahy maty vady : sikajy latsaka erany no azy, ka "lanio izay ho lany ". [Houlder 1895, Veyrières 1913]
Proverbe 424 Andevolahy mby am-batra. [Veyrières 1913 #6204, Houlder 1895]
Proverbe 425 Andevolahy miady tsinain-kena , ka voin-tenan’ izay tsy maharirotra . [Veyrières 1913 #520, Cousins 1871 #187]
Proverbe 426 Andevolahy mianala : ka ny hazon' andriana tsy tonga, fa ny fanoto no lanjalanjaina . [Houlder 1895]
Proverbe 427 Andevolahy miandry lapa : miambin-draha tsy an-tena. [Samson 1965 #A65]
Proverbe 428 Andevolahy mielo , ka manampina ny anjara -masoandrony. [Houlder 1895]
Proverbe 429 Andevolahy mikalo hariva: tsy alahelo fa kibo tsy feno. [Houlder 1895]
Andevolahy mikalo maraina , na hariva : tsy alahelo , fa kibo tsy voky . [Veyrières 1913 #524]
Andevolahy mikalo maraina : tsy alahelo , fa kibo tsy voky. [Cousins 1871 #189]
Proverbe 430 Andevolahy mitono jabora , ka levona mbamin' ny lohaliny. [Houlder 1895 #1584, Veyrières 1913 #525, Rinara 1974 #279]
Proverbe 431 Andevolahy mizaha lanonana : tonga vao lasa maka kitay . [Veyrières 1913 #526]
Proverbe 432 Andevolahy nifaham-boatavo : zara fa nihinana. [Veyrières 1913 #528, Cousins 1871 #191]
Hovalahy nifaham-boatavo , ka zara raha nifahana. [Houlder 1895 #1424, Veyrières 1913 #493]
Proverbe 433 Andevolahy nifahana ondry : tafahaona samy main-dranjo . [Veyrières 1913 #529, Cousins 1871 #192]
Proverbe 434 Andevolahy nifahana ondry : voky ny tonony ihany, ka tsy misy hasiana ny nahandrony. [Veyrières 1913 #530, Cousins 1871]
Proverbe 435 Andevolahy nizaha lanonana : any amy ny kitay ihany no eritreritra . [Cousins 1871]
Andevolahy nizaha lanonana : any amin' ny kitay ihany no entreritra . [Veyrières 1913 #531]
Proverbe 436 Andevolahin' ny hariana ny aina . [Veyrières 1913]
Proverbe 437 Andevolahin- telopolo mitaingina ariary zato . [Veyrières 1913 #501]
Proverbe 438 Andevolahy ondanam-hady : atao avaratra , mianatsimo loha ; atao atsimo, tototry ny kitay. [Cousins 1871 #195]
Manao andevolahy ondanam-bady : atao avaratra , mianatsimo loha ; atao atsimo , tototry ny kitay . [Veyrières 1913 #564]
Proverbe 439 Andevolahy tsy mahatra-drasa : any avara-tanàna vao mingoso anabavy . [Cousins 1871 #196, Veyrières 1913]
Proverbe 440 Andevolahy tsy mahatra-drasa : miapoka ery atsimom- patana. [Veyrières 1913 #533]
Proverbe 441 Andevo lavenom-potsy : raha lolohavina manditso-maso . [Veyrières 1913 #535]
Proverbe 442 Andevo maro tompo , ka mifidy ny avo tokonana . [Rinara 1974 #212]
Andevo maro tompo: mifidy izay avo tokonana . [Veyrières 1913 #536, Cousins 1871 #172]
Proverbe 443 Andevo maty tompo : raha tsy matim-panompoana , maty voky . [Houlder 1895 #1587, Veyrières 1913 #2840]
Proverbe 444 Andevo miompa andriana , ka raha tsy omby any am-body rova , tsy vita . [Veyrières 1913 #537]
Proverbe 445 Andevon' andevo . [Veyrières 1913 #538]
Proverbe 446 Andevon-drazana ; andevo ompikely . [Veyrières 1913 #539]
Proverbe 447 Andevon-trova : mandady miditra. [Samson 1965 #A63]
Proverbe 448 Andevo tokana amin' Andriana : raha tsy matin’ iraka , maty voky. [Houlder 1895 #1536, Cousins 1871 #171]
Andevo tokana amin' andriana : raha tsy matin' iraka , maty voky ; raha tsy maty voky , matin' iraka . [Veyrières 1913 #540]
Andevo tokana an-trano , ka raha tsy matin' iraka , maty voky . [Rinara 1974 #213]
Proverbe 449 Andevo tsy mba namana . [Veyrières 1913 #541]
Proverbe 964 Aza manao andevolahy mahay valiha : asai-manao , tsy mety ; nony tsy irahina , manao. [Cousins 1871 #417]
Proverbe 965 Aza manao andevolahy mandà tompo . [Veyrières 1913]
Proverbe 993 Aza manao fanambadian' andevo . [Veyrières 1913 #78]
Proverbe 1074 Aza manao lamban' andevo ka tsy harahana. [Houlder 1895 #1547, Veyrières 1913 #2589]
Proverbe 1150 Aza manao tanin' andron' andevolahy , ka ny kibo no atolotra andro. [Houlder 1895]
Proverbe 1393 Aza mikapa sakaiza hoatry ny andevolahy homan-tain-jiro . [Veyrières 1913 #546]
Proverbe 1410 Aza miraikiraiky toy ny andevom-behivavy . [Houlder 1895 #1546]
Miraikiraiky toy ny andevom-behivavy . [Veyrières 1913 #574, Cousins 1871 #1809]
Proverbe 1842 Donto tahaka ny sorok’ andevolahy mpilanja . [Cousins 1871 #862]
Donto tahaky ny sorok' andevolahy mpilanja . [Veyrières 1913 #6354]
Proverbe 1951 Fanahin' andevo . [Veyrières 1913 #547]
Proverbe 1952 Fanahin’ andevo , mandevona. [Cousins 1871 #899]
Ny fanahin' andevo , mandevona. [Veyrières 1913 #583]
Proverbe 1957 Fanahin-kisoa : tsy manana andevo , ka tia tondro molotra . [Veyrières 1913 #548, Cousins 1871 #904]
Fanahin-kisoa : tsy manana mpanompo ka tiatondro-molotra . [Rinara 1974 #1075]
Proverbe 2281 Hanina omena andevolahy : tsy tian-kano , tian-kano . [Veyrières 1913 #552, Abinal 1888]
Toy ny hanina omena andevo : "Tian-kano , tsy tian-kano ". [Houlder 1895 #1564, Cousins 1871 #3195]
Toy ny hanina omena mpanompo : tian-kano , tsy tian-kano . [Rinara 1974 #4283]
Proverbe 2357 Hendry miady amin’ adala : havazinana no hita. [Cousins 1871 #1050]
Proverbe 2487 Hovalahy mamosavy andevolahy , ka misolo ny entan- kitainy . [Houlder 1895 #1582, Veyrières 1913 #492]
Proverbe 2601 Ivadinao tsy miteny , ividiano andevokely . [Veyrières 1913 #557, Cousins 1871 #1155]
Ivadinao tsy miteny , ividiano mpanompokely . [Rinara 1974 #1456]
Vadinao tsy miteny , ividiano andevo kely. [Houlder 1895 #1777]
Proverbe 2646 Izay hajaina tsy ho andriana tsy akory, ary izay manaja tsy ho andevo tsy akory; ka tsara ny mifanaja . [Houlder 1895 #187]
Proverbe 2786 Kabaro tsy hefaina tsy andoavana andevo antitra . [Samson 1965 #K4]
Proverbe 3128 Lavenom-potsy ny andevo , ka raha aingaingaina manditsi-maso . [Veyrières 1913 #559]
Ny andevo toy ny lavenom-potsy , ka raha aingaingaina manditsoka . [Houlder 1895]
Ny andevo , toy ny lavenom-potsy : raha aingain-gaina , mahaditsi-maso . [Veyrières 1913 #559, Cousins 1871 #2160]
Ny mpanompo toy ny lavenom-potsy ka raha ingaingaina manditsoka . [Rinara 1974 #3160]
Proverbe 3130 Lavi-dingana hoatry ny andevolahy misikidy ho andriana . [Houlder 1895 #1586, Veyrières 1913 #5853]
Lavi-dingana toy ny mpanompo misikidy ho andriana . [Rinara 1974 #1768]
Proverbe 3231 Madio midina, toy ny andevo manasa lamban' Antananarivo . [Houlder 1895 #1551]
Madio midina toy ny tsongavavin' Antananarivo handeha hanasa lamba . [Rinara 1974 #1826]
Proverbe 3326 Maina tsy azo diasana, hoatry ny fia-parin' andevolahy . [Veyrières 1913 #560]
Proverbe 3398 Mamantan-trano vita , hoatry ny andevolahy namidy . [Veyrières 1913 #561]
Proverbe 3485 Manambitamby lava , toy ny manana andevo tokana . [Houlder 1895 #1541, Veyrières 1913 #562]
Manambitamhy lava, toy ny manana andevo tokana . [Cousins 1871 #1501]
Proverbe 3495 Mananatra zaza tsy nateraka mahabe foto-tsofina . [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Maniraka andevo tsy nohinary , mahabe foto-tsofina . [Veyrières 1913 #566, Cousins 1871]
Maniraka ny zaza tsy nateraka , ka mahabe vavorona . [Veyrières 1913 #922, Cousins 1871 #1618]
Maniraka zaza tsy nateraka , ka mahavizam-bava . [Rinara 1974 #2111]
Zanaka tsy nateraka , mahabe vavorona . [Houlder 1895 #1874, Veyrières 1913 #953]
Proverbe 3534 Manao andevolahy miandry faty : ny hena no andrasany eo, tsy mba ny faty no andrasana . [Veyrières 1913 #563]
Proverbe 3789 Maniraka andevo tsy noharina ka mahavizam-bava . [Houlder 1895 #1554]
Proverbe 4054 Miangaly miserana, toy ny andevolahy mizaha lanonana , fa raha tonga maka kitay . [Veyrières 1913 #570]
Proverbe 4056 Miangatra , hoy Itsarafihavy : vao teraka dia andevolahy , ka atao Itsarafihavy . [Veyrières 1913 #571, Cousins 1871 #1719]
Proverbe 4132 Mifakofako kitay merika andro , ka mahatsiaro ny andevo namidy . [Veyrières 1913 #572, Cousins 1871 #1758]
Proverbe 4191 Mihinjihinjy hoatry ny andevolahy maty anaka . [Veyrières 1913 #5558]
Mihinjihinjy ohatra ny andevolahy maty anaka . [Houlder 1895]
Proverbe 4388 Mitavozavoza hoatry ny andevom-behivavy . [Veyrières 1913 #576]
Proverbe 4518 Mivontovonto ratsy hoatry ny andevolahy voky taim-piraka . [Veyrières 1913 #2216]
Proverbe 4535 Mody amy ny laoniny, ohatra ny andevolahy verin-trosa . [Cousins 1871]
Proverbe 4537 Mody an-tanindrazana , toy ny andevolahy lany harena . [Veyrières 1913 #578, Cousins 1871 #1936]
Proverbe 4606 Mpandova tsy mahay mitahiry : ho andevon' ny mpiasa hendry . [Rinara 1974]
Proverbe 4910 Ny anankiray natao hoe andevo namidy "; ny anankiray natao hoe "nifindra fihinana "; ary ny anankiray natao hoe "andevo tsy fiompy"; ary ny anankiray natao hoe "andevon-drazana ". [Houlder 1895]
Proverbe 4926 Ny andevolahy kapila voahitsaka ; ny andevovavy vomanga an-kotrika . [Houlder 1895 #1549, Veyrières 1913 #582]
Proverbe 4927 Ny andevo loza tompo no tsara midina, tsy ampy ny omen' ny tompony . [Veyrières 1913 #2317]
Proverbe 4928 Ny andevo : sompatra , tsy miasa izy, rahefa mahay valiha , dia amidy . [Veyrières 1913 #579]
Proverbe 4929 Ny andevo tompoi-manompo . [Veyrières 1913 #580]
Toy ny andevo : tompoi-manompo . [Houlder 1895]
Proverbe 4930 Ny andevo tsy mba rai-olona . [Veyrières 1913 #581, Cousins 1871 #2161]
Proverbe 5048 Ny fanambadian' andevo tsy manam-pahefana toy ny hefakefak' omby . [Houlder 1895 #1585, Veyrières 1913 #1218]
Proverbe 5120 Ny fo be andevon’ ny tenabe . [Samson 1965 #N6]
Proverbe 5163 Ny havana manavangavana, ary ny fanahin' andevo mandevona. [Veyrières 1913 #300]
Proverbe 5702 Ny vitsy andevolahin’ ny maro . [Cousins 1871 #2478]
Ny vitsy andevon' ny maro . [Houlder 1895 #1548]
Proverbe 5754 No dia tsy manana tsinona , ka no dia manao andevolahy mampirafy ka manita-draharaha ? [Veyrières 1913 #1430]
Proverbe 5997 Rafozana tsy tompo, vinanto tsy andevo : laha misaraka samy olon-ko azy. [Samson 1965 #R10]
Proverbe 6029 Raha hety ny atao , hazondrano tonga andevo . [Houlder 1895 #1557]
Raha mety ny atao , ny hazondrano aza tonga mpanompo . [Rinara 1974 #233]
Proverbe 6098 Raha miady ny andevolahy , dia ny maty momba ny maty , ary ny sisa manompo. [Veyrières 1913 #6003]
Proverbe 6113 Raha mpanan-karena tsy mahavoky andevo , dia sahala amy ny malahelo ihany; ary raha malahelo be hanin-kotrana , dia sarotra atao malahelo. [Cousins 1871]
Raha mpanan-karena tsy mahavoky andevo , dia sahala amin' ny malahelo ihany ; ary raha malahelo be hanin-kotrana , sarotra atao malahelo . [Veyrières 1913 #588]
Proverbe 6168 Raha tsara ny vadin-drahalahy , dia amosavina ny rahalahy hitondrana loloha ; raha be omby sy be andevo , isomparana hahazahoana harena . [Veyrières 1913 #1163]
Proverbe 6737 Tahaky ny andevolahy voky vomanga : tsy taviny, fa salibany . [Veyrières 1913 #589]
Proverbe 6836 Tandroky ny andevovavy ny fisoitra afo : sady mahay manavia , manavanana . [Cousins 1871]
Tandroky ny andevovavy ny fisoitrafo : sady mahay manavia , manavanana . [Veyrières 1913 #590]
Tandroky ny andevovavy ny fisoitr' afo , sady mahay manavia no mahay manavanana . [Houlder 1895]
Tandroky ny mpanompo ny fisoitrafo , ka manavia : kinga, manavanana : mailaka . [Rinara 1974 #4039]
Proverbe 7110 Toy ny andevolahy miandry faty : izay mahery vava ihany no amboninjato . [Veyrières 1913 #593, Cousins 1871]
Proverbe 7254 Tompoi-manompo tahaka ny andevo . [Rinara 1974 #4176]
Proverbe 7435 Tsy atakalo , tsy amidy resy , toa zana- drazana. [Rinara 1974 #4480]
Tsy atakalo , tsy amidy resy , toy ny andevon-drazana . [Houlder 1895 #1556, Veyrières 1913 #594, Cousins 1871 #3338]
Proverbe 7519 Tsy mahafoy kirobo hamidy gadra , ka very (an-devon ) telo-polo . [Cousins 1871 #3363, Nicol 1935 #99]
Proverbe 7656 Tsy mety raha manao andevovavy may trano : ny trano may tsy hitany, fa "Maty aho varin- -janako !". [Cousins 1871 #3433]
Tsy mety raha manao ankizivavy may trano , ka ny trano may tsy hitany fa ny may ao ny varin- -janako no ambentin-teny . [Rinara 1974]
Proverbe 7681 Tsy mety raha mitaraikiraiky , sahala amin' ny andevom-behivavy . [Rinara 1974 #4650]
Tsy mety raha mitaraikiraiky , toy ny andevom-behivavy . [Cousins 1871 #3467]
Proverbe 7687 Tsy mety raha ny mahazo andevo milefa indray no mandoa vola folo . [Veyrières 1913 #597, Rinara 1974 #4661, Cousins 1871 #3477]
Proverbe 7797 Tsy mitsapa farany hoatry ny andevolahy mangery an-jezika na an-davenona . [Veyrières 1913 #599]
Proverbe 7963 Vakam-potsin' andevolahy : ka sady an-doha no an-tongotra . [Veyrières 1913 #600]
Vakapotsin' andevolahy : ka sady an-doha no an-tongotra . [Houlder 1895]
Proverbe 7975 Valabalaka hoatry ny andevolahy homan-goaika . [Veyrières 1913 #602]
Proverbe 8442 Zoky toavina tsy andriana , zandry manoa tsy andevo ; fa ifanoavana no mahamasina ny manjaka. [Veyrières 1913 #1170]